maayirka cusub ee degmada Burco Cabdirisaaq Ibrahim Cabdi (Hero).
Thursday June 24, 2021 - 21:54:11 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Asagoon lahayn awoood kasta oo bulshada arimaha haysta wax lagaga qaban karo, ayuu u istaagey in uu naftiisa ka xoreeyo dabarrada badan ee deegaankiisa ka jira,
wuxuuna cod dheer bulshada qeybaheeda kala duwan si mutadawacnima ugu tilmaami jirey qabyadeeda tiro beelka ah halka marar fara badana uu gacmiisa ula tagi jirey si uu wax uga qabto.
Wuxuu ka mid yahay jiilka sadexaad ee Soomaalilaan asagoo wax barashadiisi dugsiga Hoose,Dhexe,Sare iyo Jaamacadiiba kaga baxay dalka gudihiisa, wuxuu xogogaal u yahay nooc kasta oo mushkilad ah oo deegaankiisa ka jirta, asagoo waliba mashkiladaha qaar daraasado ka sameeyey.
Waligii nin ay niyad jabiyeen maaha mushkiladaha tiro beelka ah ee deegaankiisa ka jira, bal ee waxaan odhan kara wuxuu kasii qaadayey dhiiranaan dheraad ah.
Mar kasta ood kulantaan waa shaqsi kaala sheekeysanaaya danta guud iyo sidii loo xalin lahaa, wuxuuna aaminsan yahay in awood maamul dhibaatooyinka jira badankooda wax loogaga qaban karo.
Waa aqoonyahan indheer-garad, qunyar soocod ah isla markaasna xidhiidh dhaw la leh qeybaha kala duwane bulshada, waa nin leh sifooyinka dhaqanka Soomaalidu ku sifeeyo ina rag ka ugu mudan. Naaneystiisuna waxay caan ka dhex noqotey deegaankiisa, imikana waa maayirka cusub ee degmada Burco Cabdirisaaq Ibrahim Cabdi (Hero).
Bulshada degmada Burco ku dhaqan oo mudo dheer ilahay ka baryaayay inuu hogaan khayr qaba oo dhibaatooyinkooda tirada badan wax ka qabta u soo saaro; yaan odhan kara ilahay ducadii waa ka aqbaley.
Ugu danbeyntii waxaan bulsho weynta burco ugu baaqaya qeybaheeda kala duwan iney garab istaag iyo la shaqeyn u muujiyan golaha cusub ee degmada si ay u rumeeyaan riyooyinkeena, Burcana uga dhigaan degmo lasoo noqota kaalinteedi waayo-waayo